IJordani ukuze iphinde ifumane amandla okhenketho angaphambi kobhubhane ngokuphehlelelwa kwegama elithi “Kingdom of Time”
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » IJordani Breaking News » IJordani ukuze iphinde ifumane amandla okhenketho angaphambi kobhubhane ngokuphehlelelwa kwegama elithi “Kingdom of Time”
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • IJordani Breaking News • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Resorts • Imitshato yothando • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
IJordani ukuze iphinde ifumane amandla okhenketho angaphambi kobhubhane ngokuphehlelelwa kwegama elithi “Kingdom of Time”.
Ngaphaya kommangaliso wehlabathi wePetra, amava eJordani ayefumana ingqalelo yehlabathi jikelele ngendalo ephumelele ibhaso kunye neentshukumo ezifana neJordan Trail enqumla uBukumkani ukusuka emantla ukuya emazantsi inika iimbono zeNtlambo yeJordani kunye noLwandle oluFileyo kwindawo esezantsi yeplanethi, kuba. Ukhenketho lwasezidolophini kunye nedolophu, kunye neqela laseBhritane elibalaseleyo iColdplay ngokumangalisayo likhetha amabhodlo amandulo amaRoma kunye namaSilamsi entliziyweni yekomkhulu langoku i-Amman njengeqonga lokusungula icwecwe labo likaNovemba ka-2019 lweMihla yoBomi, kunye nokutsala abafuna incasa zokwenyani ukonwabela I-mosaic ye-Arabic culinary eyonwabisayo yekhitshi yaseJordanian.
Ekuqaleni kuka-2020, ubhubhani we-COVID wamisa ngequbuliso into eyayisele ikukukhawulezisa okumangalisayo kweminyaka emininzi kunye nokwahlukahlukana konikezelo lokhenketho lwaseJordan.
Njengoko iJordan ilungiselela iindwendwe ezivela kwihlabathi liphela, lifikile ixesha lokuphinda sazise iJordan, uBukumkani bethu beXesha, kubaphulaphuli behlabathi.
Uphawu olutsha lwezokhenketho lwaseJordan lukwaphawula utshintsho kwindima yokhenketho njengomqhubi wophuhliso lwasekhaya oluzinzileyo.
UBukumkani baseJordani bumiselwe ukuba buphinde buphinde buphinde buphinde bube nokhenketho lwabo lwangaphambi kobhubhane ngokuphehlelelwa kohlobo olutsha lokhenketho kwiMarike yokuHamba yeHlabathi eLondon namhlanje.
Ngeqonga lebhrendi legama elithi 'Kingdom of Time', iJordan iphinda izazise njengendawo efikelelekayo, enika umdla neneenkalo ezininzi enomtsalane kuhlanga olukhulayo lwehlabathi lwabahambi abangoyikiyo; abazimeleyo, abasebenzayo, abaphononongi abaxhotyiswe ngedijithali kunye nabahambi abafuna amava anentsingiselo kunye noqhagamshelwano lwabantu.
Ekuqaleni kuka-2020, ubhubhani we-COVID wamisa ngequbuliso into eyayisele ikukukhawulezisa okumangalisayo kweminyaka emininzi kunye nokwahlukahlukana konikezelo lokhenketho lwaseJordan. Ngokufikeleleka lula koBukumkani ngeenqwelo-moya ezinexabiso eliphantsi, iJordan yayishukumisa indawo yayo yesiqhelo “yesifundo sembali”, kwaye isizukulwana esitsha sabasunguli bezokhenketho baseJordan songeza amava amatsha anika umdla kumhlaba omangalisayo wamandulo waseJordani.
Ngaphaya kwemimangaliso yehlabathi Petra, i Jordan amava ayefumana ingqalelo yehlabathi jikelele ngendalo ephumelele ibhaso kunye nokukhenketha okunje ngeJordan Trail enqumla uBukumkani ukusuka emantla ukuya emazantsi inika iimbono zeNtlambo yeJordani kunye noLwandle oluFileyo kweyona ndawo iphantsi yesijikelezi-langa, kukhenketho lwasezidolophini nakwiidolophu, kunye neBhritane. -band Coldplay ikhethe ngokumangalisayo amabhodlo amandulo amaRoma kunye namaSilamsi entliziyweni yekomkhulu langoku i-Amman njengeqonga lokuphehlelela icwecwe labo likaNovemba ka-2019 Ubomi Bemihla ngemihla, kunye nokutsala abantu abafuna iincasa zokwenyani ukonwabela i-mosaic ye-Arabhu yokonwabisa ekhitshini laseJordanian. .
Uphawu olutsha lwezokhenketho lwaseJordan, olwalucetyelwe ukuqaliswa kwasekuqaleni kuka-2020 bekufanele ukuba lube ngumbhiyozo wamava okhenketho oBukumkani. Ke, ngoMatshi ka-2020 umhlaba wema.
“Kwiinyanga ezingamashumi amabini emva koko, iJordan ibuyile, ilungele ukutyhila uphawu lwayo olutsha lwezokhenketho, njengembonakaliso yokwenyani yendawo ekunokufikelwa kuyo, enokuthi, kumhlaba onokuhanjwa ngemoto ngaphantsi kosuku, idibanise ndawonye ikholaji edizayo yejoloji neyendalo. iyantlukwano, ubutyebi bembali, isithethe somoya kunye nokholo, kunye nenkcubeko yangoku yaseArabia yokuvuleleka kunye nokwamkela iindwendwe ezifudumeleyo ezamkela wonke umntu ngokuzonwabisa, ishishini kunye nokuphilisa, utshilo uNayef Al-Fayez, uMphathiswa wezoKhenketho eJordan.
Ukuba uluntu lufundile nantoni na kulo bhubhani, luluvo oluhlaziyiweyo lwexesha, nto leyo eyenza isiseko sophawu lwaseJordan sithenjiswe 'njengoBukumkani beXesha' ngakumbi namhlanje: indawo apho umntu anokulichukumisa ngokoqobo lonke ixesha lejoloji kunye nembali yoluntu, apho ixesha linokuhamba ngokukhawuleza kumbindi wesixeko esiphithizelayo, okanye lihambe kancinci xa lintywila kuLwandle Olubomvu kumahlathi eekorale aphantsi kwamanzi eAqaba, okanye lide lime ngokupheleleyo kwintlango yeWadi Rum, phantsi kwesibhakabhaka esicacileyo esityhila iMilky Way. .
“Uphawu olutsha lwezokhenketho lwaseJordan lukwaphawula utshintsho kwindima yokhenketho njengomqhubi wophuhliso lwasekhaya oluzinzileyo. Idityaniswe kunye nokhenketho olubanzi lwaseJordani, inkcubeko kunye noluntu oluyilayo, uphawu luye lwaqulunqwa yiBhodi yezoKhenketho yaseJordan ngokusebenzisana nemanyano yeefemu zasekhaya nezehlabathi, eziyilwe njengesixhobo esibandakanyayo ekusasazeni ukhenketho kulo lonke ilizwe, kuxhamle zombini. abasebenzi bokhenketho lwemveli kunye nesizukulwana sethu esakhulayo sabadali bamava okhenketho,” utshilo uGqr Abdel Razzaq Arabiyat, uMlawuli oLawulayo weBhodi yezoKhenketho yaseJordan.
Ngaphaya kolwakhiwo lophawu, urhulumente waseJordan kunye neshishini lezokhenketho basebenze ngokuzimisela ukuqinisekisa ukhuseleko lwezempilo lwabemi kunye neendwendwe. Iinzame ezinempumelelo zoBukumkani ekuthinteleni iliza lokuqala le-COVID libe ngumxholo wehlabathi ngo-2020. “Namhlanje siphakathi kwamazwe okuqala kulo mmandla anecandelo lokhenketho eligonywe ngokupheleleyo,” wongeze watsho u-Al-Fayez.
“Njengoko iJordan ilungiselela iindwendwe ezityelele kwihlabathi liphela, ixesha lifikile lokwazisa kwakhona iJordan, uBukumkani bethu beXesha, kubaphulaphuli behlabathi,” wongeze watsho.
IJordani: Ubukumkani bexesha, jonga ividiyo yentengiso ngo ngokunqakraza apha